USA oo Balanqaaday Malaayiin Dollar oo lagula dagaalamayo Ayaxa ku habsaday dalal ay kamid tahay Somalia. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaUSA oo Balanqaaday Malaayiin Dollar oo lagula dagaalamayo Ayaxa ku habsaday dalal ay kamid tahay Somalia.
USA oo Balanqaaday Malaayiin Dollar oo lagula dagaalamayo Ayaxa ku habsaday dalal ay kamid tahay Somalia.
February 19, 2020 marqaan Faalloyinka, Somali News 1
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay bixin doonto sideed milyan oo Doolar si wax looga qabto Ayaxa ku habsaday dalalka bariga qaaradda Afrika.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka, Mike Pompeo oo deeqdaas ku dhawaaqay Talaadadii, ayaa shaaca ka qaaday in lacagtaas ay si gaar ah ugu talagaleen Wadamada Soomaaliya, Itooiya iyo Kenya oo uu halakeeyay ayaxa ku habsaday dalagyadooda.
“Mareykanka ayaa wuxuu 8 milyan ku taageerayaan howlgalada iska caabinta Ayaxa ee gobolka si gaar ah Itoobiya ,Kenya iyo Soomaaliya,”ayuu Pompeo ka sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Caasimada Itoobiya ee Adis Ababa.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Mike Pompeo ,ayaa hadalkaan ka sheegay Caasimada Itoobiya waxaana shirkiisa jaraa’id ku wehlinaayay,dhigiisa Xukumada Adis Ababab Gedu Andargachew .
Pompeo ayaa sidoo kale kulan la qaatay ra’iisul wasaare Abiy Axmed, kaasoo ay kawada hadleen arrimo quseeya gobolka iyo khilaafka kala dhaxeeya Masar eek u aadan marinka miyaha Niil oo ay isku haystaan Masar,Itoobiya iyo Suudaan.
Kaalamdaan aya kusoo aadeysa iyaddoo Qaramada Midoobay ay ka digtay in Ayaxa uu ku faafo wadamo kale, taasoo ay xustay in ay khatar gelin karto nolosha kumaanaan ruux oo noloshoodu ku tiirsantahay Wax-soosaarka beeha.
Ayaxa oo dilaacay bishii December 2019, ayaa la xaqiijiyey in uu cagta mariyey kumanaan kun oo dhul-beereed ah, waana duulaankii ugu xumaa taariikhda muddo 70-sano ah siday ay qaxiijisay Qaramada midoobay.
Dowladda Mareekanka oo ku dhawaaqay amar ka dhan Warbaahinta laga leeyahay Dalka Shiinaha.
Qowmiyadda caddaanka ah sideena caqligoodu u ma foororo ee waa shaadiriin dhibaatooyinka dunida kale ka dillaaca dhaadan in ay iyaga ku habsan doonaan haddii aanay ka hortagin. Arxan iyo naxariis ay inoo hayaan kama aha ee waxay ka tahay fariidnimo ay iyagu belaayada ku soo waajahan iskaga sii gaashaamayaan.